Baby and hair loss – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
သငျ့ရငျသှေးလေး ဆံပငျတှေ ကြှတျတယျဆိုပွီး စိုးရိမျနပေါသလား ။ မပူပါနဲ့ ဒါဟာ ဖွဈလဖွေ့ဈထရှိတဲ့ အရာတဈခုပါ ။ အသကျ ခွောကျလ အတောအတှငျး ကလေးငယျမြားမှာ ဆံပငျကြှတျခွငျးဟာ ဖွဈပှားလရှေိ့ပါတယျ ။
အကွောငျးရငျးကတော့ ဒီလိုပါ ။ ဆံပငျပေါကျခွငျးမှာ ဆံပငျသနျစှမျးရှညျလြားခွငျးနဲ့ငွိမျနခွေငျးဆိုတဲ့ အခြိနျနှဈခုရှိပါတယျ ။ သနျစှမျးရှညျလြားခွငျးဟာ သုံးလအထိ ကွာသလို ငွိမျသကျနတေဲ့ကာလဟာလဲ သုံးလခနျ့ကွာပါတယျ ။ ငွိမျသကျနတေဲ့ကာလမြားမှာ ဆံပငျဟာ ဆံပငျအရငျးတှငျးရှိ အဆီအိတျလေးတှမှော သနျစှမျးရှညျလြားခြိနျမရောကျမီ ငွိမျသကျနတောပါ ။
လူရဲ့ဆံပငျစုစုပေါငျးရဲ့ ၅ % ကနေ ၁၅% လောကျထိဟာ ငွိမျသကျခွငျး ကာလမှာ ရှိနတောပါ ။ ဒါပမေယျ့ စိတျဖိစီးမှုတှေ ၊ ဒါမှမဟုတျ ဟျောမုနျးအပွောငျးအလဲတှကေ ဆံပငျတှပေေါကျဖှားသနျစှမျးရှညျလြားမှုကို တားဆီးစနေိုငျပါတယျ ။ ဆံပငျကြှတျခွငျးဟာ နောကျသုံးလအကွာမှ သနျစှမျးရှညျလြားခွငျးကာလမှာ ဖွဈတာပါ ။
မှေးကငျးစ ကလေးငယျတှမှော ဟျောမုနျးပမာဏက ရုတျတရကျ ပွောငျးလဲသှားတဲ့အတှကျ မှေးရာပါ ဆံပငျလေးတှဟော ကြှတျကုနျရခွငျးဖွဈပါတယျ ။ ( ဒါကွောငျ့လဲ တခြို့အမတှေမှောလဲ ကလေးမီးဖှားပွီး ဆံပငျအဆုပျလိုကျကြှတျခွငျးမြိုးဖွဈပှားရခွငျးဖွဈပါတယျ )
တခြို့မိဘတှဆေို သူတို့ရငျသှေးလေးဟာ မှေးတုနျးက ဆံပငျအရောငျ ဆံသားတှဟော အရှယျရောကျလာခြိနျ ကြှတျကုနျပွီး ပုံစံမတူတဲ့ အရောငျ ဆံသားတှထှေကျလာတာတှကေိုပါ တှရှေိ့ရပါတယျ ။ တခြို့ကလေးတှမှော မှေးကငျးစအရှယျ မိဘတှနေဲ့မတူဘဲ မဲမှောငျနပွေီး မှေးပွီးသိပျမကွာခငျမှာမှ မိဘတှနေဲ့ တူတဲ့ ဆံသားအသဈထှကျလာတာမြိုးတှေ တှရေ့ပါတယျ ။
အောကျပါအခကျြတှကေတော့ ကလေးငယျတှမှော ဆံပငျကြှတျစတေဲ့ အကွောငျးအရငျးတှပေါပဲ
* အနီသို့မဟုတျ အမဲရောငျ အကှကျတှေ ဟိုတဈကှကျ ဒီတဈကှကျတှရေ့ခွငျး
* ဒဏျရာရခွငျး – အထူးသဖွငျ့ အလှနျတငျးတဲ့ ကွကျတောငျစီးမြိုး စီးပေးခွငျး
* ကလေးငယျမှ မိမိဆံပငျကို အတငျးဆှဲခွငျး ၊ နှုတျခွငျး
* အကယျ၍သငျ့ကလေးမှာ ခြောပွောငျပွီး လုံးဝထိပျပွောငျနတေဲ့ အနအေထားမြိုးတှရှေိ့ရပါက သငျ့ကလေးရဲ့ခုခံအားက ဆံပငျအမွဈတှကေို တိုကျခိုကျနလေို့ပဲဖွဈပါတယျ ။ ဒီလိုမြိုးအခွအေနကေို အကှကျလိုကျ ဒါမှမဟုတျ တဈခေါငျးလုံးမှာ တှရှေိ့နိုငျပါတယျ ။
* တခြို့သော ရောဂါအခွအေနတှေဖွေဈတဲ့ သိုငျးရှိုကျဟျောမုနျး ရောဂါအခွအေနတှေမြေိုးမှာလဲ တဈခေါငျးလုံး ဆံပငျကြှတျခွငျးမြိုးဖွဈပှားနိုငျပါတယျ ။
ကြှနျတျော ကြှနျမတို့ ကလေး ဆံပငျကြှတျရငျ ဘာလုပျပေးလို့ရမလဲ ?
ဟျောမုနျးအပွောငျးအလဲကွောငျ့ဖွဈရတဲ့ ဆံပငျကြှတျခွငျး အခွအေနတှေမှော မိဘတှအေနနေဲ့ စိုးရိမျမနဘေဲ စောငျ့ကွညျ့ပေးနိုငျပါတယျ ။
အကယျ၍ ဆံပငျကြှတျခွငျးဟာ အိပျစကျခြိနျ အနအေထားတဈခုထဲမှာ အခြိနျကွာကွာရှိနတောမြိုးကွောငျ့ ဖွဈပှားနသေညျဟု ယူဆရလြှငျ ကလေး တရေးတမော အိပျစကျခြိနျ ၊ ညအိပျခြိနျတှမှော ပုံစံပွောငျး သိပျပေးပါ ။
ကလေးအရှယျခွောကျလကြျောသညျအထိ ဆံပငျကြှတျခွငျး ဆကျလကျဖွဈပှားနပေါက ဆရာဝနျနှငျ့ ပွသပါ ။ သို့မှသာ ဆရာဝနျမှ စမျးသပျကွညျ့ရှုပွီး ပုံမှနျဟုတျမဟုတျ ရောဂါအခွအေနတေဈခုရှိမရှိ ဆုံးဖွတျပေးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ ။ ဥပမာ သံရှိနခွေငျးကွောငျ့ သှေးအားနညျးပွီး ဆံပငျကြှတျခွငျး အခွအေနမြေိုးတှရှေိ့ပါက သံခဖြို့ ညှနျကွားပေးနိုငျပါတယျ ။
အကယျ၍ ရှားပါး ဦးရပွေားရောဂါလက်ခဏာမြိုးတှရှေိ့ပါက အရပွေားအထူးကုဆရာဝနျထံ လိုအပျသော ကုထုံးမြား ဆကျလကျလုပျဆောငျနိုငျရနျ လှဲပွောငျးပေးမှာဖွဈပါတယျ ။
သင့်ရင်သွေးလေး ဆံပင်တွေ ကျွတ်တယ်ဆိုပြီး စိုးရိမ်နေပါသလား ။ မပူပါနဲ့ ဒါဟာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အရာတစ်ခုပါ ။ အသက် ခြောက်လ အတောအတွင်း ကလေးငယ်များမှာ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းဟာ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါတယ် ။
အကြောင်းရင်းကတော့ ဒီလိုပါ ။ ဆံပင်ပေါက်ခြင်းမှာ ဆံပင်သန်စွမ်းရှည်လျားခြင်းနဲ့ငြိမ်နေခြင်းဆိုတဲ့ အချိန်နှစ်ခုရှိပါတယ် ။ သန်စွမ်းရှည်လျားခြင်းဟာ သုံးလအထိ ကြာသလို ငြိမ်သက်နေတဲ့ကာလဟာလဲ သုံးလခန့်ကြာပါတယ် ။ ငြိမ်သက်နေတဲ့ကာလများမှာ ဆံပင်ဟာ ဆံပင်အရင်းတွင်းရှိ အဆီအိတ်လေးတွေမှာ သန်စွမ်းရှည်လျားချိန်မရောက်မီ ငြိမ်သက်နေတာပါ ။
လူရဲ့ဆံပင်စုစုပေါင်းရဲ့ ၅ % ကနေ ၁၅% လောက်ထိဟာ ငြိမ်သက်ခြင်း ကာလမှာ ရှိနေတာပါ ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ၊ ဒါမှမဟုတ် ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲတွေက ဆံပင်တွေပေါက်ဖွားသန်စွမ်းရှည်လျားမှုကို တားဆီးစေနိုင်ပါတယ် ။ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းဟာ နောက်သုံးလအကြာမှ သန်စွမ်းရှည်လျားခြင်းကာလမှာ ဖြစ်တာပါ ။
မွေးကင်းစ ကလေးငယ်တွေမှာ ဟော်မုန်းပမာဏက ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက် မွေးရာပါ ဆံပင်လေးတွေဟာ ကျွတ်ကုန်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ ( ဒါကြောင့်လဲ တချို့အမေတွေမှာလဲ ကလေးမီးဖွားပြီး ဆံပင်အဆုပ်လိုက်ကျွတ်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပွားရခြင်းဖြစ်ပါတယ် )
တချို့မိဘတွေဆို သူတို့ရင်သွေးလေးဟာ မွေးတုန်းက ဆံပင်အရောင် ဆံသားတွေဟာ အရွယ်ရောက်လာချိန် ကျွတ်ကုန်ပြီး ပုံစံမတူတဲ့ အရောင် ဆံသားတွေထွက်လာတာတွေကိုပါ တွေ့ရှိရပါတယ် ။ တချို့ကလေးတွေမှာ မွေးကင်းစအရွယ် မိဘတွေနဲ့မတူဘဲ မဲမှောင်နေပြီး မွေးပြီးသိပ်မကြာခင်မှာမှ မိဘတွေနဲ့ တူတဲ့ ဆံသားအသစ်ထွက်လာတာမျိုးတွေ တွေ့ရပါတယ် ။
အောက်ပါအချက်တွေကတော့ ကလေးငယ်တွေမှာ ဆံပင်ကျွတ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေပါပဲ
* အနီသို့မဟုတ် အမဲရောင် အကွက်တွေ ဟိုတစ်ကွက် ဒီတစ်ကွက်တွေ့ရခြင်း
* ဒဏ်ရာရခြင်း – အထူးသဖြင့် အလွန်တင်းတဲ့ ကြက်တောင်စီးမျိုး စီးပေးခြင်း
* ကလေးငယ်မှ မိမိဆံပင်ကို အတင်းဆွဲခြင်း ၊ နှုတ်ခြင်း
* အကယ်၍သင့်ကလေးမှာ ချောပြောင်ပြီး လုံးဝထိပ်ပြောင်နေတဲ့ အနေအထားမျိုးတွေ့ရှိရပါက သင့်ကလေးရဲ့ခုခံအားက ဆံပင်အမြစ်တွေကို တိုက်ခိုက်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလိုမျိုးအခြေအနေကို အကွက်လိုက် ဒါမှမဟုတ် တစ်ခေါင်းလုံးမှာ တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ် ။
* တချို့သော ရောဂါအခြေအနေတွေဖြစ်တဲ့ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း ရောဂါအခြေအနေတွေမျိုးမှာလဲ တစ်ခေါင်းလုံး ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ် ။
ကျွန်တော် ကျွန်မတို့ ကလေး ဆံပင်ကျွတ်ရင် ဘာလုပ်ပေးလို့ရမလဲ ?
ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း အခြေအနေတွေမှာ မိဘတွေအနေနဲ့ စိုးရိမ်မနေဘဲ စောင့်ကြည့်ပေးနိုင်ပါတယ် ။
အကယ်၍ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းဟာ အိပ်စက်ချိန် အနေအထားတစ်ခုထဲမှာ အချိန်ကြာကြာရှိနေတာမျိုးကြောင့် ဖြစ်ပွားနေသည်ဟု ယူဆရလျှင် ကလေး တရေးတမော အိပ်စက်ချိန် ၊ ညအိပ်ချိန်တွေမှာ ပုံစံပြောင်း သိပ်ပေးပါ ။
ကလေးအရွယ်ခြောက်လကျော်သည်အထိ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါက ဆရာဝန်နှင့် ပြသပါ ။ သို့မှသာ ဆရာဝန်မှ စမ်းသပ်ကြည့်ရှုပြီး ပုံမှန်ဟုတ်မဟုတ် ရောဂါအခြေအနေတစ်ခုရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ။ ဥပမာ သံရှိနေခြင်းကြောင့် သွေးအားနည်းပြီး ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း အခြေအနေမျိုးတွေ့ရှိပါက သံချဖို့ ညွှန်ကြားပေးနိုင်ပါတယ် ။
အကယ်၍ ရှားပါး ဦးရေပြားရောဂါလက္ခဏာမျိုးတွေ့ရှိပါက အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ထံ လိုအပ်သော ကုထုံးများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် လွှဲပြောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ။
Tips for liftingachild